खेलकुद Archives - Page4of7- Bagaicha.com
विश्वकप फुटबलमा अाज हुने तीन खेलहरू………..
१० असार २०७५, रूस – रसियामा जारी २१ औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबलमा आइतबार (आज) ३ खेलहरू हुँदैछन्। समूह चरण दोस्रो राउन्ड अन्तर्गत आज हुने पहिलो खेलमा समूह जी मा रहेका इङ्ल्याण्ड र पानामाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल निज्नी नोभागोरोड रंगशालामा नेपाली समयअनुसार साँझ ५ः४५ बाट सुरु हुनेछ। आफ्नो पहिलो खेलमा इङ्ल्याण्डले ट्युनिसियालाई २–१ ले पराजित गर्दा पानामा बेल्जियमसँग ३–० ले हारेको थियो। अघिल्ल...
ललितपुर तेस्रो आदिवासी जनजाती कप फुटबल प्रतियोगिता २०७५ को समापन कार्यक्रममा हिजो खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले आगमी प्रतियोगितामा सहयोग गर्नका साथै खेलकुद विकाशका लागि सरकार तथा राष्ट्रिय खेलकुल परिषदले सधै लागि पर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। उनले खेलकुद विकास नभए सम्म देश विकास नहुने भन्दै सरकाले आगमी बजेटबाट अन्तराष्ट्रिय स्वर्ण पदक विजेतालार्इ मासिक सम्मान भत्ता रू ५,०००...
०९ असार २०७५, सारांस – विपक्षी खेलाडीहरूको मार्किङबाट चर्चित खेलाडीको प्रदर्शन सन्तोषजनक नदेखिएका बेला जारी विश्वकपमा पोर्चुगलका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो मात्र राम्रो प्रदर्शन गर्न सफल भएका छन्। दुई खेलमा चार गोल गरेका रोनाल्डोबाहेक अन्य चर्चित खेलाडीले टोलीका लागि गोल गर्न सकेका छैनन्। स्टार मानिएका ब्राजिलका खेलाडी नेइमारबाट गोलको अपेक्षा गरिए पनि उनले स्विट्जरल्यान्डविरुद्ध गोल गर्न ...
असार ८, २०७५ काठमाडौं । रसियामा जारी विश्वकप २०१८ समूह ‘डि’ को अन्तिम खेलमा अर्जेन्टिनाविरुद्व क्रोसियाले ३ गोल गर्दै विजयी बनेको छ । क्रोयसियाका खेलाडी एन्टी रेबिकले दोस्रो हाफको ५३ औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका थिए । त्यस्तै लुका मोड्रिकले खेलको ८० औं मिनेटमा दोस्रो गोल गरेका थिए भने ९१ औं मिनेटमा इभानले तेस्रो गोल गरेका हुन् । यसअघि खेलको पहिलो हाफमा अर्जेन्टिना र क्रोयसियाबीच गोलरहित बराबरी भएक...
फुटबलमा अाज हुने तीन खेलहरू………..
०७ असार २०७५, रूस – फ्रान्समा जारी २१ औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबलमा बिहीबार (आज) ३ खेलहरू हुँदैछन्। समूह चरण दोस्रो राउन्ड अन्तर्गत आज हुने पहिलो खेलमा समूह सी मा रहेका डेनमार्क र अष्ट्रेलियाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल समारा एरिना रंगशालामा नेपाली समयअनुसार साँझ ५ः४५ बाट सुरु हुनेछ। आफ्नो पहिलो खेलमा अष्ट्रेलिया फ्रान्ससँग २–१ ले पराजित भएको थियो भने डेनमार्कले पेरुलाई १–० ले हराएको थियो। आज...
०६ असार २०७५, काजान – अन्तिम समयमा प्रशिक्षक युलेन लोप्तेगी बर्खास्तगीमा परेपछि रूस विश्वकपमा स्पेनिस टोलीमा त्यसको प्रभाव पर्ने सर्वत्र अनुमान थियो। तर पहिलो खेलमा शुक्रबार पोर्चुगलविरुद्ध स्वाभाविक प्रदर्शन गर्दै स्पेनले टिममा त्यसको नकारात्मक असर नपरेको प्रमाणित गरेको थियो । उत्कृष्ट प्रदर्शनका बावजुद पहिलो खेलमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोको पोर्चुगलसँग ३–३ को बराबरीमा रोकिएको स्पेनले अघिल्लो...
०५ असार २०७५, सरांस – कोलम्बिया र जापान मंगलबार आमनेसामने हुँदा उक्त भेटले पुनः एक पटक ४ वर्षअघि ब्राजिल विश्वकपमा भएको खेलको झल्को दिनेछ । समूहचरणको अन्तिम खेलमा कोलम्बियाले जापानलाई ४–१ ले पराजित गरेको थियो। ४ वर्षअघि क्वार्टरफाइनलसम्मको यात्रा पक्का गरेको कोलम्बियाका लागि स्ट्राइकर राडामेल फाल्काओ पूर्ण रूपमा फिट हुँदै टोलीमा फर्कनु सुखद पक्ष हो । कोलम्बिया ब्राजिल विश्वकपमा देखाएको उत्कृष...
इङ्ल्याण्डको कप्तान ह्यारी केन नायक……..
०५ असार २०७५, रूस – कप्तान ह्यारी केनले इन्जुरी समयमा गोल गरेपछि विश्वकप फुटबल अन्तर्गत समूह ‘जी’ को आफ्नो पहिलो खेलमा इङ्ल्याण्डले ट्युनिसियालाई २–१ ले पराजित गरेको छ। भोल्गोग्राड एरिना रंगशालामा सोमबार राति सम्पन्न तेस्रो खेलमा ११ औं मिनेटमा गोल गर्दै केनले टोलीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर पहिलो हाफकै ३५ औं मिनेटमा ट्युनिसियाका फिर्जनी सासीले पेनाल्टीमार्फद गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएक...
असार ३, २०७५ मस्को । विश्वकप फुटबलको चौँथो दिन आइतबार ३ वटा खेलहरु हुँदैछन् । पहिलो खेलमा कोस्टारिका र सर्बिया, दोस्रोमा जर्मनी र मेक्सिको तथा अन्तिम खेलमा ब्राजिल र स्वीटजरल्याण्ड भिड्दैछन् । यी टोलीहरुमध्ये ब्राजिल एक्लो टोली हो जसले सबै विश्वकप खेलेको छ । र, पछिल्लो ८० वर्षमा विश्वकपको कुनै पनि शुरुवाती खेलमा पराजित भएको छैन । उता, साबिक विजेता जर्मनीले विश्वकप १९ पटक खेलेको छ । यो प्रतियोगिता...
आठ वर्षपछि फर्किए विश्वकपमा सर्बिया…………
०३ असार २०७५, मस्को – विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आइतबारको पहिलो खेलमा सर्बिया र कोष्टारिकाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल नेपाली समयअनुसार साँझ ५ः४५ पछि समारा रंगशालामा सुरु हुनेछ। सबियाले ८ वर्षपछि विश्वकपमा पुनरागमन गरेको हो। युरोपेली छनोट प्रतियोगिताअन्तर्गत समूह ‘डी’ मा रहेको सर्बियाले विजेताको हैसियतमा रूसको टिकट पक्का गरेको हो। सर्बिया युरोपेली छनोट प्रतियोगितामा वेल्स, आयरल्यान्ड, अस्ट्रिया, जर्ज...
टेटेको वास्तविक परीक्षण,स्विट्जरल्यान्ड………….
०३ असार २०७५, रोस्तोभ – घरेलु मैदानमा सम्पन्न विश्वकप सेमिफाइनलमा जर्मनीसँग ७–१ को लज्जास्पद हार व्यहोरेको पीडा भुलाउँदै ब्राजिलले टिम पुनर्निर्माणका लागि ४ वर्ष खर्चिसकेको छ। प्रशिक्षक टेटेले स्ट्राइकर नेइमारको प्रदर्शनमा मात्र निर्भर टोलीलाई यसबीचमा धेरै परिस्कृत गरिसकेका छन् । जसले दक्षिण अमेरिकी छनोटमा गरेको प्रदर्शनले पनि प्रमाणित गर्छ । ब्राजिल विश्वकप छनोट प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा बस्...
रोनाल्डोको ह्याट्रिकसँगै बराबरी……….
असार २, २०७५ काठमाडौँ । क्रिस्टियानो रोनाल्डोले उत्कृष्ट फ्रिकिक गोलसहित आफ्नो ह्याट्रिक पूरा गरेपछि पोर्चुगल र स्पेनबीचको रोमाञ्चक खेल ३–३ को बराबरीमा सकिएको छ । खेलको निर्धारित समय सकिन दुई मिनेट अघि गोल गर्दै रोनाल्डोले खेल ३–३ को बराबरीमा ल्याएका हुन् । यसअघि स्पेनविरुद्ध एक पनि गोल गर्न नसकेका रोनाल्डोले योसँगै पोर्चुगलका लागि छैटौँ र आफ्नोको करियरको ५१ औँ ह्याट्रिक पनि पुरा गरे । उनी स्पेनव...